पछिल्लो समय अम्बिका गुरुङको यी दुइ गीतबाट चर्चित छन् गायक रमेश श्रेष्ठ ! — Motivate News
पछिल्लो समय अम्बिका गुरुङको यी दुइ गीतबाट चर्चित छन् गायक रमेश श्रेष्ठ !
Posted on January 7, 2018 by Ghanshyam Shrestha
काठमाडौँ – पछिल्लो समय गायक तथा म्युजिक कम्पोजर रमेश श्रेष्ठ स्टेज कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छन । दोलखामा जन्मिएका श्रेष्ठ काठमाडौंमा बसोबास गरेर गीत संगीतमा निरन्तर संघर्षरत छन् । संगीत नै जीवन हो भनेर लागिपरेका श्रेष्ठ दर्शक स्रोता माझ मेलोडी गायकका रुपमा परिचित छन् । उनी भन्छन – ‘मानिसको पौष्टिक आहारा भनेकै संगीत हो चाहे सुख होस् चाहे दुख होस् जुन अवस्थामा पनि संगीत अपरिकार्य छ’ ।
बिशेष गरेर लोक र आधुनिक लयको गीत गाउने श्रेष्ठले पछिल्लो समय गीतकार अम्बिका गुरुङको पप गीत ‘अल्झियो’ गीतबाट पनि राम्रो चर्चा कमाउन सफल भएका छन् । यो गीतको सफलता संगै गुरुङकै अर्को देश प्रेमी ‘मेरो देश नेपाल’ बोलको गीत पनि उतिकै चर्चामा छ । स्टेज कार्यक्रममा उनले यहि गीतबाट आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्ने गर्दछन ।
गायक रमेश श्रेष्ठको आवाजमा रहेको उक्त गीत शब्द गीतकार गुरुङको रहेको छ, भने संगीत गायक श्रेष्ठले नै भर्नु भएको छ ।